novembre 2016 - Page 3 sur 25 -
30/11/2016 admintriatra 0
Efa voajerin’ny fitondram-panjakana avokoa ireo lesoka tokony hitondrana vahaolana hampisy fampandrosoana maharitra eto Madagasikara. Nisy ny drafi-pampandrosoana matipaika napetraka momba izany dia ny Pnd (Plan National de Développement). Iompanan’ny sehatry ny fampandrosoana amin’izany ny lafin’ny …Tohiny
Niakatra ny rano :TSY MIASA NY BEN’NY TANANA
Vao nilatsaka nandritra ny 30 minitra ny orana ny alatsinainy hariva teo, dia efa niakatra izay tsy izy ny rano tamin’ireo faritra iva teto an-drenivohitra. Anisan’ireo faritra nitondra faisana tamin’izany ny teny Besarety, teo ihany …Tohiny
“MBOLA LAVITRA !”
29/11/2016 admintriatra 0
Sahirana amin’ny fitadiavana sy ny asa fivelomana ny Malagasy manomboka ny alatsinainy hatramin’ny sabotsy. Ny alahady vao mba afaka miaraka amin’ny fianakaviana sy ny vady aman-janaka, manararaotra maka rivotra mivoaka kely ivelan’ny renivohitra. Amin’io fotoana …Tohiny
Vadin’ny Filoham-pirenena:NANOME OHATRA IREO NAMANY
Variana ny vadin’ny Filoham-pirenena tamin’ireo firenen-kafa nivahiny teto amintsika nandritra iny Frankôfônia iny, raha nahita ny asa sosialy nataon’ny vadin’ny Filoham-pirenena, Voahangy Rajaonarimampianina, tao anatin’izay fotoana nipetrahan’ny Repoblika fahefatra izay. Nofintinina tao anatin’ny minisitra vitsy …Tohiny
Fiantsonan’ny taxiborosy : Ho vita tsy ho ela
Efa ny 70 isan-jaton’ ny asa izay tanterahina amin’ny fiantsonan’ny taxiborosy etsy Andohatapenaka izao no vita raha ny fanazavana azo avy amin’ ireo teknisianina manatanteraka ny asa, nandritra ny fitsidihan’ny minisitry eo anivon’ny fiadidiana ny ...Tohiny
Faritra Diana sy Sofia : Nijery akaiky ireo traboina ny Filoham-pirenena